ပင်မစာ မျက်နှာ > နည်းပညာဆိုင်ရာ ဗဟုသုတများ > စာစုများ > စာစု ၈
ETC Sensor Ohm and Voltage Test
ECT Sensor ရဲ့ကောင်းခြင်းမကောင်းခြင်း မကောင်းခြင်းဟာ သူ့မှာရှိတဲ့ resistanceတန်ဖိုးပေါ်မှာ မူတည်နေပါတယ်..ဒါကြောင့် multimeter နဲ့ resistance ကို တိုင်းဖို့လိုပါတယ်...
ပထမဆုံး ETC Sensor socket ကိုဖြုတ်ပြီး multimeter ကို resistance range မှာထားပြီး sensor ရဲ့ငုုတ် ၂ ငုတ်ဖြဟ်တဲ့ THW နဲ့ E2 ကို တိုင်းတာရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်...အကယ်၍ sensor အေးနေတဲ့ ချိန်တိုင်းတာမည်ဆိုပါက 2.32kohms to 2.59kohms ကြားရှိနေမှာဏဲ ဖြစ်ပါတယ်..
.နောက်ပြီး ပူနေတဲ့ အချိန်တိုင်းတာရင် 0.31komhs to 0.326komhs ကြားမှာ ရှိနေပါတယ်...အဲ့ဒီလို ECT Sensor ကို ohm test လုပ်ကြည့်လို့ သတ်မှတ်ထားတဲ့ ပမာဏထက် အလွန်များပြားနေပါက. open circuit ဖြစ်နေတာလို့ ယူဆနိုင်ပြီး ohm တန်ဖိုး zero ဖြစ်နေပါက shork circuit ဖြစ်နေပြီး sensor ပျက်နေတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်...
ECT Sensor ကို Voltage test လုပ်တဲ့အခါမှာ 68°F ကြားမှာရှိနေရင် 0.5V to 3.4V. လောက်ရှိရပါမယ်...နောက်ပြီး140°F မှာ တိုင်းတာပါက 0.2V to 1V ကြားရှိရပါမယ်...ဒါကြောင့် Engine ရဲ့ temperature အလိုက် Voltage တန်ဖိုးနဲ့. resistance ဟာ အပြောင်းအလဲရှိနေမှာပဲဖစ်ပါတယ်...
ECT sensor ကို oscilloscope နဲ့တိုင်းတာပါက channel ရဲ့ voltage to timebase မှာ waveform ဟာ 3V လောက်ကနေ timebase အဆုံး 8m20s ထိ ခပ်ပြေပြေကစားသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်...နောက်ပြီး အပေါ်မှာ voltage test လုပ်ခဲ့သလို မျိုး အများဆုံး 3.4V ထက်မကျော်သလိုပဲ scope ရဲ့ waveform မှာ အဲ့ဒီအတိုင်း 3V လောက်မှာ waveform အလုပ်လုပ် မှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်...
ဖော်ပြပါ စာပိုဒ်ကိုတော့ ဆရာဇော်မိုး ရဲ့ EFI Sensors Wirring စာအုပ်မှ တစ်ဆင့်ကူးယူဖော်ပြခြင်းဖြစ်ပါတယ် ခင်ဗျာ...
ဒီလို EFI sensors wirring အကြောင်းတွေကို တစ်စုတစ်စည်းတည်း ဖော်ပြပေးထားတာလေးတွေ ဖတ်ချင်တယ် ဆိုရင်တော့ ဆရာဇော်မိုး(EFI) ရေးသားတဲ့ EFI Sensors Wirrnig. နှင့်မော်တော်ယာဉ်အခြေခံနည်းပညာများ စာအုပ်ကို ဝယ်ယူဖတ်ရှု နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ....
*** AK Car Tools***